System76 kuve komputa yezvigadzirwa zvemakomputa | Linux Vakapindwa muropa
Sisitimu76 kambani inozivikanwa kwete kwete chete kuva mutengesi weGnu / Linux makomputa nemidziyo yeIT asiwo nekuve mumwe wevatengesi vekutanga kugadzira kugoverwa kweGnu / Linux kune vashandisi nevatengi.
Izvi zvinogona padhuze nekupfuura se System76 nguva pfupi yadarika yakazivisa kuti ichave inogadzira HardwareMune mamwe mazwi, haichazotengesa michina yakaungana neyechitatu-bato zvikamu asi ichave iri kambani inotengesa nekuparadzira yayo yega Hardware uye software. Zvinenge zvakafanana neMicrosoft uye Apple.Kunyangwe nharaunda dzeGnu / Linux dzakawanda uye Internet yakavakirwa pachikamu chikuru pamaseva ane Gnu / Linux, chokwadi ndechekuti kune makambani mashoma anotengesa michina ine yemahara software uye kunyangwe mashoma ayo anogadzira yavo yega Hardware.
Asi, System76 haisi yega kambani yakaita seiyi. Neraki isu tine muSpain makambani maviri anotengesa michina ine yemahara software uye Gnu / Linux kugoverwa uye kuti zvishoma nezvishoma ivo vari kuzvinangisa pachavo kune nyika ye Hardware.
Imwe yacho ndeyeVantPC iyo yatotengesa keyboards ane penguin bhatani pachinzvimbo Windows bhatani. Chimiro chekuti mushure memakore ekuvapo kweGnu / Linux, zvisipo mumusika. Iko kune zvakare nyaya yekambani yeSlimbook. Kambani inotengesa nekuparadzira michina yavakaungana ivo uye zvishoma nezvishoma iri kufamba ichienda kune yavo nyika Hardware. Ivo vachangobva kutengesa kutengesa 100% Gnu / Linux inoenderana vhidhiyo mutambo wekutapa chishandiso.
Kuuya kwemakambani aya kumusika wepc kunogona kunonoka, asi izvi hazvireve chinhu chisina kunaka. Ini ndinotenda kuti kuvapo kwayo hakusi kungobatsira chete kumusika asiwo kune gadzira iyo Gnu / Linux sarudzo yakasimba munyika yekomputa, sarudzo yatovepo asi ichiramba munzvimbo zhinji nenzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » System76 ichave inogadzira michina yemakomputa
Ini handinzwisise kuti iwe unoona iyo UAV kana anga aine makore mazhinji uye vasina kumboita chero chinhu kune veGNU / Linux nharaunda.
Ivo havana iyo penguin mune avo ese mamodheru chete mune mamwe uye ivo vari kutanga kuisa izvo izvo zvino… .. makore mangani gare gare 6 kana makore manomwe? Mangwanani akanaka !!
Pasina kutaura izvo zvavasina KUITIRA nharaunda mumakore ano, kuti vanga vasina foramu kana chero chinhu zvachose.
System76 inochengetedza yega kugovera, iwe wakamirira UAV kuti iite kudaro ...
Pindura kuna Gon
Kune vagadziri kana vanounganidza kuti vape zvigadzirwa zvinoenderana zvizere neGNU / Linux, zvinoita kunge zvakakwana kwandiri. Ini handidi imwe neimwe kuti ipe yayo yoga kugovera kana foramu. Iko kutove nezvakanaka kwazvo kugoverwa kusarudza kubva.
Ini handidi kuti michina igoenderana chete neyeye mugadziri, ini ndoda kukwanisa kusarudza chero kugoverwa uye kuti zvese zvinoshanda, izvi zvinosanganisira kusafanirwa nekuisa chaiwo madhiraivha anopiwa nemugadziri.
Iyo yekuvandudza yakaitwa neSystem76 inosunungurwa. Kana ikaita chimwe chinhu chakanaka, inogona kushandiswa mune mamwe ma distros.
Kunyange zvakadaro, waingova muenzaniso wekambani inoita zvinhu zvevashandisi veLinux, zvichienzaniswa nemamwe makambani asingaite chinhu, kunze kwekutengesa churros yechando uye pre-inopisa.
Zvinonzwika zvakanyanya kwandiri, zvirinani kunonoka kupfuura kusati kwamboitika. Vant naSlimbook vakazvipira munharaunda, handizive kana kwenguva pfupi kana yakareba, asi kubva pandakanzwa nezvavo kuburikidza nepodcast ndinovatevera uye vari kuhwina mibairo pane yakavhurwa sosi. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutora iyo Librem5 foni kunze uye kubatanidza, kukwazisa nharaunda. Zvakanaka kutumira.
Hauna kundinzwisisa Javier, akati Slimbook ndiye akazvipira kunharaunda uye ndiye akapihwa mubairo, kwete Vant uye kuti vanga vaine mamwe makore akawanda. Ndisati ndave neVant uye mushe, havana kushata, makore mana zvakandibata. Uye zvechokwadi iyo Slimbook ine zvirinani kupedza, uye kusvika parizvino ndiri kuita zvakanaka. Kana zvikakanganisa ndinonyunyuta.
Ini ndanga ndichinyunyuta kuti chete vamwe vakaita saSystem76 uye Slimbook vanoitira zvinhu nharaunda. Handizive kana iwe ukaverenga idzi nhau kuti Slimbook yakavhura saiti yepanyama uko Linux inodzidziswa, asi ini ndinovateverawo paTwitter uye ivo vari kupa emahara makosi vhiki rega rega: